माघ १७ देखि २० सम्म चौथो प्राङ्गारिक कृषि मेला
भोली नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटा विरुद्ध सुनुवाइ
शैक्षिक बिकासमा एकतावद्व हुन पूर्व विधार्थीहरुको आव्हान
पहिले माया पछि घृणा : झिम्के मामा
बलिउडमा कसको पढाई कति ?
बलिउड नायिकाहरुको सुन्दरताको रहस्य
काठमाडौं । गाउँमा चुनाव हुँदैछ, त्यही माहोलमा एकजना बिशु भन्ने मान्छेको निधन हुन्छ । चुनावले तात्तिएको बेला कसले गर्‍यो होला उसको हत्या ? अनि किन भयो त उसको हत्या ? यो समाज कस्तो हो जहाँ मानिस नै मानिसलाई लखेटिरहेछ । कहाँ जाँदैछ समाज ?
राजनीतिले कसरी समाजलाई कुरुप बनाउँदैछ भन्ने कुरामा आधारित नाटक हो ‘महाभोज’ । ‘महाभोज’ राजनीति केन्द्रित नाटक हो । नाटकलाई अनुप बरालले निर्देशन गर्दैछन् । हिन्दुस्तानकी प्रसिद्ध साहित्यकार मन्नु भण्डारीले लेखेको यस नाटकलाई विप्लव प्रतीकले नाट्य रुपान्तरण गरेका छन् ।
मण्डला थिएटरको होम प्रोडक्सन रहेको नाटकमा रमेश बुढाथोकी, शेखर चापागाईँ, दयाहाङ् राई, राजन खतिवडा, सिर्जना सुब्बा, बुद्धि तामाङ, प्रदीपकुमार चौधरी, बिजय बराल, प्रमिला खनाल, सोमनाथ खनाल लगाएतका कलाकारहरुको अभिनय रहनेछ ।
नाटक भदौ १४ देखी असोज १२ गते सम्म अनामनगर स्थीत मण्डला नाटकघर मञ्चन हुनेछ ।